Ihichapụ ozi ịntanetị site na gị iPhone bụghị a aka ọrụ maka ndị a na-eji Apple ngwaahịa maka mgbe. Kama nke ahụ, usoro nwere ike ịghọ mgbagwoju maka ọhụrụ iPhone ọrụ. Nkebi a na-akọwa otú ị nwere ike wepu ozi ịntanetị, email akaụntụ, voicemails na mailboxes si gị iPhone dị mfe na-egbu ụzọ.
Dị mfe okwu, nke a na ngalaba na-akọwa otú ị nwere ike ijikwa ihe niile metụtara ozi ịntanetị na voicemails na gị iPhone.
Part 1. Olee iji Hichapụ Email Accounts si iPhone
Ihichapụ akaụntụ email gị iPhone achọ ole na ole nzọụkwụ ka tụnyere agbakwunye a akaụntụ ọhụrụ na ya. The nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka na-esi ihichapụ ihe email na akaụntụ gị iPhone ndị dị ka ndị:
Kpatụ Ntọala ngosi site na Home ihuenyo.
Site Ntọala window, ịchọta na enweta Mail, Ndi ana-akpo, kalenda.
Site Mail, Ndi ana-akpo, kalenda window, enweta aha nke eweta ọrụ maka akaụntụ email gị na ị chọrọ ka ihichapụ. (Gmail n'ihi na nke a ngosipụta.)
Na-esote window, enweta Nhichapụ Akaụntụ.
Site popped elu nkwenye igbe, pịa Hichapụ si My iPhone.
Ma ọ dị mkpa, Malitegharịa ekwentị gị iPhone.
Part 2. Olee iji Hichapụ Multiple ozi ịntanetị site na iPhone
Ọ bụrụ na gị igbe na-ọnụọgụgụ mmadụ karịrị na ọtụtụ na-achọghị na-abaghị uru Gburu, ọ dị mkpa na-ewepụ ha iji na-na akaụntụ email gị na Igbe mbata dị ọcha. Wepụ onye email n'otu otu mgbe ga-abụ ihe impractical obibia na ga-abụ nnọọ tedious na-ewe oge kwa. Iji merie a, iPhone-enye gị ohere iji wepụ multiple ozi ịntanetị na otu laa. Ị nwere ike wepu multiple ozi ịntanetị site na isoro ntuziaka nyere n'okpuru:
Ike na gị iPhone
Site na Ihuenyo gị iPhone, chọta na enweta na Mail akara ngosi.
Na Mailboxes window, enweta All Inboxes nhọrọ na-ele ozi ịntanetị rutere n'ebe ahụ inboxes gị niile akaụntụ email kwukwara na gị iPhone.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị kwukwara naanị otu akaụntụ email, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji wepụ nnukwu ozi ịntanetị site na a akpan akpan akaụntụ, enweta aha nke-eweta ọrụ email nwere akaụntụ gị.
Site All Inboxes window, si n'elu-nri akuku, enweta Dezie.
Pịa iji họrọ niile na-achọghị ozi ịntanetị na ị chọrọ iji wepu gị iPhone.
Ozugbo họrọ, enweta Mkpofu na ala-nri akuku nke interface wepụ họrọ ozi ịntanetị.
Part 3. Olee iji Hichapụ Voicemails si iPhone
Voicemails nwere ike ime ka nche iro karịsịa na mmepụta gburugburu. Iji hụ na gị na mwute ozi-anọgide chekwaa, ọ dị mkpa ka ihichapụ voicemails nwere mkpa stof si gị iPhone ozugbo o kwere omume. I nwere ike ime ahụ site na isoro ntuziaka kọwara n'okpuru:
Tụgharịa na gị iPhone.
Kpatụ ekwentị ngosi site na Home ihuenyo gị iPhone.
Na ala-nri akuku nke meghere window, enweta oziolu.
Site meghere interface, enweta na swipe na-achọghị ozi olu ozi olu.
Ozugbo Nhichapụ button (ke uhie gburugburu na-egosi) enweta bọtịnụ iwepu ozi olu ozi olu.
Part 4. Olee iji Hichapụ a igbe akwụkwọ ozi dị si iPhone
Ihichapụ a igbe akwụkwọ ozi dị site na iPhone dị mfe dị ka ogologo oge ka ọ bụghị ndabara otu. Ị pụrụ ịgbaso nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka nyere n'okpuru ka ihichapụ a igbe akwụkwọ ozi dị ka i kere aka:
Jide n'aka gị iPhone na kwadoro on.
Site na Ihuenyo gị iPhone, enweta Mail akara ngosi.
Site meghere Mailboxes window, si n'okpuru akaụntụ ngalaba, enweta na-eweta ọrụ email gị na akaụntụ email si ebe ị chọrọ ka ihichapụ igbe akwụkwọ ozi dị. (Gmail ebe a maka ngosipụta.)
Site ọzọ window nke na-abịa elu, enweta Dezie si n'elu-nri akuku.
Ozugbo mere, enweta igbe akwụkwọ ozi dị na ị chọrọ ka ihichapụ.
Site Dezie igbe akwụkwọ ozi window, mgbata Hichapụ igbe akwụkwọ ozi dị ma na-egosi gị ihe mgbe kpaliri iji ihichapụ achọghị igbe akwụkwọ ozi dị gị iPhone.
Ma ọ bụla ụlọọrụ gburugburu ebe obibi ma ọ bụ n'ụlọ, onye ọ bụla chere ihu a ọnọdụ ebe iwepu ozi ịntanetị na voicemails si gị iPhone-aghọ oké mkpa. Mgbe ụfọdụ, ị nwekwara ike chọrọ ka ihichapụ dum mailboxes ma ọ bụ ọbụna ndị metụtara akaụntụ email site na iPhone kpam kpam maka ebumnuche nche.
Ọ bụrụ na ị na-eche na a ga-esi na ya pụta ma ọ bụrụ na gị onwe onye data Nwela gụrụ ndị ọzọ, gị mma nzọ ga-ewepu ọmụma si gị iPhone ozugbo o kwere omume. Otú ọ dị, jide n'aka na ị ndabere nile data tupu erasing. Nke a dị mkpa n'ihi na mgbe ụfọdụ nwere ike ị chọrọ iji nweta gị data azụ, na Iweghachi na-ehichapụ data si ndabere bụ ụzọ dị mfe ime otú ahụ.
> Resource> iPhone> Olee otú iji Hichapụ ozi ịntanetị site na iPhone